Depiote Mapar, Rakotomanga Lanto : “Tsipahinay marindrano ny hanitsiana lalàmpanorenana” | NewsMada
Depiote Mapar, Rakotomanga Lanto : “Tsipahinay marindrano ny hanitsiana lalàmpanorenana”
Hanao angaredona noho ny tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka. “Mitsipaka marindrano ny fikasan’ny mpitondra hanitsy lalàmpanorenana izahay. Efa maro ireo antoko sy fikambanana ary fiarahamonim-pirenena, hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena, tsy mankasitraka izany. Efa nilaza izany koa ny Tim ka tsy maintsy hojerena ny mety ho fiarahana, miaraka amin’ireo depiote hafa toy ny Malagasy miara-miainga, Hiaraka isika…”, hoy ny depiote Mapar, Rakotomanga Lanto, teny Ambohipo, omaly. Nambarany koa fa efa miomana amin’ny fifidianana amin’ny taona ho avy izy ireo, saingy tokony hazava ny fitsipi-dalao. Anisan’izany ny tokony handraisan’ny rehetra anjara sy mangarahara ary azo antoka izany. Nohitsiny anefa fa tsy mbola amin’izany lalàmpanorenana izany ny resaka amin’izao fotoana izao. “Vonjena aloha ny ain’ny vahoaka izao. Maika ny sosialiny. Aoka tsy hifanilika andraikitra isika. Tsy afaka hijery fotsiny ny mpiray tanindrazana maty isan’andro izahay ka mandray andraikitra ”, hoy ihany izy. Nandraraka ranom-panafody hiadiana amin’ny pesta teny amin’ny boriborintany II ny tenany miaraka amin’ireo mpikambana Mapar sasany sady nanentana ny olona teny an-toerana ho amin’ny fahadiovana.
Tsy fotoan’ny fifanomezan-tsiny
Nanao hetsika tahaka izany koa ny depiote Raholdina Naivo, teny amin’ny boriborintany fahadimy. “Samy manao ny tandrifiny ny tsirairay fa tsy iandrasana ny mpamatsy vola na ny fanjakana izany. Tsy fotoan’ny fanilihana andraikitra na hanaovana resaka politika sy hifanomezan-tsiny intsony izao. Maika ny fijerena ny fiainam-bahoaka…”, hoy izy teny Andraisoro. Nitohy tamin’ny fitetezana ireo fokontany sasany teny an-toerana izany.
Tsiahivina fa hitohy ny hetsiky ny depiote Mapar sy ireo mpiara-dia aminy, amin’ny fidinana ifotony ka handraraka fanafody hiadiana amin’ny pesta eny amin’ny boriborintany voalohany sy fahatelo ary fahefatra izy ireo, anio.